လူသား အမှားနဲ့ မကင်းဘူး ငါလုပ်တာအားလုံး မှန်တယ် အထင်ရောက်နေရင်တော့-သွားပြီပေါ့ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မွတ်စလင်များအပေါ် အနိုင်ကျင့်စော်ကားမှုမျိုးစုံ လုပ်နေမှုများကို စွမ်းအားရှင်နှင့်အောင်သောင်းကသာ လုပ်ဆောင်နေခြင်း ကြောင့် ဦးသိန်းစိန်၊ မင်းအောင်လှိုင် နှင့် ဦးရွှေမန်းတို့ မပါဝင် အပြစ်မရှိဟု လွဲမှားစွာထင်နေကြပါသည်
တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂ ၏ ခွပ်ဒေါင်းအလံတော်သမိုင်း အကျဉ်း »
လူသား အမှားနဲ့ မကင်းဘူး ငါလုပ်တာအားလုံး မှန်တယ် အထင်ရောက်နေရင်တော့-သွားပြီပေါ့
လူသားတယောက် အမှားနဲ့ မကင်းဘူး ဆိုတာ လက်ခံတယ်
ငါ့ပါတီ ဘယ်တော့မှ မမှားဘူးလို့ အထင်ရောက်နေရင်တော့-သွားပြီပေါ့
လွှတ်တော်တွင်း ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအိပ်မက်နဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်
ပြန်စဉ်းစား မှားလား မှန်လား
လက်ပတောင်းတောင် စုံစမ်းရေးကော်မရှင်မှာဥက္ကဌ တာဝန်ကိုယူပြီး ခေါင်းရင်းပေးခဲ့တယ်
ရခိုင်ကိစ္စ သိသိကြီးနဲ့ နှုတ်ပိတ်နေပေးခဲ့တယ်
သမ္မတကြီးနဲ့ ဟိုမှာတွေ့ ဒီမှာတွေ့
နှစ်ယောက်ထဲစကားပြောပြီး ပျားရည်နဲ့ ချွေးသိပ်ခံခဲ့တယ် ပြည်သူကို ပါတီကို ဘာမှအသိမပေး ခဲ့ဘူး
နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်မှာ ဘာသာရေးပဋိပက္ခမရှိပါဘူး အပြန် အလှန်ကြောက်နေကြတာပါလို့ ဗျောင်လိမ်ပေးခဲ့တယ်
မြန်မာပြည်မှာ ဂျီနိုဆိုက်မရှိပါဘူးလို့ နာမည်အပျက်ခံပြီး ပြောပေးခဲ့တယ်
ဦးကိုနီနဲ့ ကိုမြအေး စာပေဟောပြောပွဲတွေ အတားဆီးခံ ခဲ့ရတဲ့အချိန် ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တာလို ငြိမ်နေပေးခဲ့တယ်
ကိုယ့်ကို ရင်မြေကတုတ်လုပ် အသက်နဲ့ထပ် အကာအကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ ကိုပါကြီး ရက်ရက်စက်စက် မရှု မလှအသတ်ခံခဲ့ရတယ်-စာကလေးတစောင် ပန်းလေး တချင်းနဲ့ မေ့ပစ်ခဲ့တယ်
ဆရာထင်လင်းဦးကို ဥပက္ခာပြု စွန့်ပစ်ခဲ့တယ်
ဖေဖေတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်နဲ့ သဘောထား အတူတူကြေငြာချက်လေး ဝတ်ကြေဝတ်ကုန်ထုတ်ခဲ့တယ်
အခု ဒေါက်တာသိန်းလွင် ကိစ္စ အမှားကြီးမှားပြန်ပြီ
အပွဲပွဲ နွဲ ခဲ့သမျှ အမျိုးသားပညာရေးမှာ ဝက်ဝက်ကွဲ တော့မယ်
ဖေဖေတည်ထောင်တဲ့ တပ်မတော်ရင်ခွင်မှာ ခိုလှုံတော့ မှာလားလို့ အတွေးတွေပွားနေမိပါတော့တယ်။
This entry was posted on February 3, 2015 at 4:07 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “လူသား အမှားနဲ့ မကင်းဘူး ငါလုပ်တာအားလုံး မှန်တယ် အထင်ရောက်နေရင်တော့-သွားပြီပေါ့”
February 3, 2015 at 7:18 am | Reply
ဒေါ်စုတစ်ယောက်တည်း နုိုင်ငံရေး လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး။
ဒေါ်စုတစ်ယောက်တည်း အနစ်နာခံတာ မဟုတ်ဘူး။
ဒေါ်စုတစ်ယောက်တည်း တုိုက်ပွဲဝင်နေတာ မဟုတ်ဘူး။
ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ အနစ်နာခံ တုိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာပါ။
NLD ပါတီဝင်တွေအားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ အနစ်နာခံ၊ တုိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာပါ။
သုို့သော် ခေါင်းဆောင်တဲ့ ဒေါ်စုကုို တစ်နိုင်ငံလုံး လေးစားတယ်။
တစ်ကမ္ဘာလုံး လေးစားတယ်။ ဂုဏ်ပြုတယ်။
ပြည်သူလူထုက ကြေနပ်တယ်။ ဝမ်းသာတယ်။ ဂုဏ်ယူတယ်။
အခုတော့ လူထုလည်း အကွဲကွဲ အပြဲပြဲ
ဒေါ်စုက တာဝန်မခံလုို့ မရဘူး။
ကောင်းရင် ဒေါ်စုကောင်းလုို့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းလုို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ညံ့ရင် ဒေါ်စုညံ့လုို့၊ ခေါင်းဆောင်ညံ့လုို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကုိုယ့်ဘေးမှာ ခပ်ညံ့ညံ့တွေကုို နေရာပေးထားရင် ကုိုယ်လည်း ခပ်ညံ့ညံ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မယ်။
ကုိုယ့်ဘေးမှာ လက်ညှိုးထောင် ခေါင်းငြိမ့် အေးယဉ်ကျူးသမားတွေကုို နေရာပေးထားရင်
ကုိုယ်လည်း လက်ညှိုးညွှန်ရာ ရေဖြစ်တယ်ထင်တဲ့ ဘွရှင်မင်းတြားကြီးဖြစ်သွားမယ်။
ဒီမုိုကရေစီရေး တုိုက်ပွဲဝင် လူထုခေါင်းဆောင် ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဒေါ်စုဘေးမှာ ဝန်းရံရမှာက တုိုက်ပွဲဝင် နုိုင်ငံရေးသမား၊ သမုိုင်းရေးသူ၊ သမုိုင်းဖန်တည်းသူ၊ ထိုးဖောက်ရဲသူ၊ သတ္တိ ဗျတ္တိ ညာဏ်အမျှော်အမြင်ရှိတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်။
အဲဒီလို အရည်အချင်းရှိတဲ့ လူမျိုးတွေက လက်ညှိုးထောင် ခေါင်းမငြိမ့်ကြဘူး။ အေးယဉ် မကျူးကြဘူး။
ဒေါ်စု မျက်နှာတော်ညိုမှာကုို လူထုမျက်နှာညိုမှာလောက် သူတုို့က ဂရုမစုိုက်ဘူး။
မိမိအမြင်ကုို ရဲရဲပြောတယ်။ အပြန်အလှန် အတုိုက်အခံ ဆွေးနွေးတယ်။ လူထုအတွက် ပုိုပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အဖြေတွေ၊ နည်းလမ်းတွေကုို ရှာတတ်တယ်။
ရုံးအုပ်ကြီးလောက်၊ ဥပဒေအကြံပေးလောက် အဆင့်သာရှိပြီး ဘယ်တုန်းကမှ နုိုင်ငံရေးသမား မဟုတ်တဲ့၊ နုိုင်ငံရေး နားမလည်တဲ့၊ ဘယ်တော့မှလည်း နုိုင်ငံရေးသမား မဖြစ်လာမဲ့ ဦးညာဏ်ဝင်းလိုလူမျိုးတွေကုို နေရာပေးထားရင် ဦးညာဏ်ဝင်းအဆင့်ရှိတဲ့ အကြံညာဏ်၊ လုပ်ငန်းစဉ်၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကုိုဘဲ ရမှာပေါ့ဗျာ။
လူထုပါတီအဆင့်မီတဲ့ အကြံညာဏ်၊ လုပ်ငန်းစဉ်၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကို လုိုချင်ရင် လက်ညှိုးထောင် ခေါင်းငြိမ့် ဖော်လန်ဖားတွေကုို ဖယ်ထုတ်ပါ။
အပြန်အလှန် တန်းတူရည်တူ ဆွေးနွေးရဲ၊ လုပ်ကုိုင်နုိုင်ရဲ၊ တုိုက်ပွဲဝင်ရဲတဲ့ အရည်အချင်းရှိ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အစားထုိုးပါ။
အမှန်ဆုံး အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ပါတီဝင်ဟောင်းတွေကုို ပါဝင်စေပြီး အရေးပေါ် ပါတီညီလာခံကုို အမြန်ခေါ်ပါ။
လူညံ့တွေကုို ရဲရဲ ဖယ်ထုတ်ပါ။
လူမှန်တွေကုို ရဲရဲ လုပ်ပုိုင်ခွင့်ပေးပါ။
သုို့သော် (သိပ်ကြီးမားတဲ့ သုို့သော်ပါ။)
ပါတီ Reform Process ကို လုပ်တဲ့အခါမှာ (လုပ်ခဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။) ဦးညာဏ်ဝင်းလို၊ ဒေါက်တာတင်မာအောင်လုို၊ ဒေါ်စုစုလွင်လုို လူမျိုးတွေကဘဲ ဦးဆောင်လုပ်ကုိုင်ကြမယ်ဆုိုရင် ဦးသိန်းစိန်၊ ဦးအောင်မင်း၊ ဦးရဲထွဋ်တို့ ဦးဆောင်ပြီး ဒီမုိုကရေစီကုို ဖော်ဆောင်ပေးသလို ဖြစ်သွားမှာကုိုတော့ သတိထားပါ ဒေါ်စု။